‘विश्वभरका मोस्ट वान्टेड नेपाली’को लेख सूचनामूलक - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
‘विश्वभरका मोस्ट वान्टेड नेपाली’को लेख सूचनामूलक
विश्वभरका मोस्ट वान्टेड नेपालीसम्बन्धी लेख सूचनामूलक लाग्यो । सरकारले यस्तो प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्ने कदम चालोस् ।
- राम राना
राजनीति र पत्रकारिता बेग्ला–बेग्लै कुरा हुन् (यात्रा सन्दर्भ : प्रश्नचिह्न पत्रकारहरूको व्यवसायिकतामा) । पत्रकारितामा राजनीतिको छायाँ पर्नु राम्रो होइन । व्यवसायिक पत्रकारहरूले राजनीतिको खोल ओढ्नु भएन ।
- सुमन जोशी
निर्देशनमा पनि दिया मास्के सफल हुनेछिन् भन्ने आशा छ (अन्तर्वार्ता : युवा पुस्ता एक्सपोजर चाहन्छ) । दियालाई छिट्टै नयाँ चलचित्रमा समेत
हेर्न पाइयोस् ।
- विनोद काफ्ले
प्रमुख सहरहरू मात्र होइन, विकट ठाउँहरूमा समेत फारम बुझाउन पाइयोस् (रोजगार : प्रहरी सेवा : जवानदेखि निरीक्षकसम्म अवसर) । यसमा सहरी क्षेत्रबाहेक दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूले पनि अवसर पाऊन् ।
- जय महत
मानिस चाहिने भनेकै विपत्तिका बेला हो (गजुरियल विश्लेषण : स्वयंसेवीलाई उत्साहित गरौं) यस्तो बेला सहयोगी एवं स्वयंसेवीहरूलाई उत्साह प्रदान गर्नैपर्छ ।
- सुदन सुवेदी
यो सामग्री उपयोगी लाग्यो (साइन्स एन्ड टेक्नो : मोबाइल फोन भिज्यो ? अब के गर्ने ?) यो धेरैले भोग्ने समस्या हो । यी टिप्स काम लाग्ने खालका छन् ।
- विभिसा शाक्य
रेखा थापालाई जन्मदिनको बधाई (३६ की रेखा) । अझै राम्रा चलचित्र लिएर आउनुहोस्— शुभकामना ।
गायक दीप श्रेष्ठ धन्यवादको पात्र हुनुभएको छ (बाढीपीडितलाई दीप) । अन्य कलाकारहरूले पनि यसरी नै सहयोग गरून् ।
- सबिना क्षेत्री
नेपाल आइडलबाट बाहिरिए पनि सुरजले धेरैको मन जितेका छन् (म्युजिक डायरी : बाहिरिए सुरज) । एवार्ड हात पार्नुभन्दा श्रोताहरूको मन जित्नु ठूलो कुरा हो ।
आशिष राना लाहुरेको जीवनशैली रोचक लाग्यो (चर्चामा : हिपहपका लाहुरे) । उनले सार्वजनिक गरेको एल्बम ‘चुप लाग’ ले सफलता पाओस्— शुभकामना ।
- रुपेश मगर
यी भिखारी त अचम्मका पो रहेछन् (लखपति भिखारी) । काम गरेर खान गाहो छ, तर मागेर लखपति भएको कुरा पढेर अचम्मै लाग्यो ।
- सरोज काफ्ले
किताब चोरसम्बन्धी रोचक लेख पढ्न पाइयो (समय सन्दर्भ : म चोर हुँ) । यद्यपि पुस्तक लाइब्रेरीबाट लिएर पनि पढ्न सकिन्छ । फिर्ता दिने सर्तमा साथीभाइहरूसँग पनि माग्न सकिन्छ, यति सानो कुरा चोर्नै पर्दैन ।
- हीरा पौडेल
बधाई छ गौरीका सिंहलाई (विवादका बीच गौरकामाय राष्ट्रिय पौडी) । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पनि जित हात परोस्— शुभकामना ।
- निर्णय तन्डुकार
सबैको भाग्यमा विवाह कहाँ लेखेको हुन्छ र कोमल दिदी (अन्तर्वार्ता : महादेवले साइत जुराएको दिन बिहे हुन्छ) ? अब त पोइल जान पाम भन्ने कुरा पनि गीतमै सीमित हुने भयो ।
- सरोज खत्री
प्रजिता पाठकलाई बधाई छ (मिस टिन पूर्वाञ्चल) । क्षेत्रीय प्रतियोगिताहरूमा मात्र होइन अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा पनि अगाडि आउनुपर्छ ।
अचम्मको खबर पढ्न पाइयो (डिम्ब सुरक्षित गर्दै चिनियाँ युवती) । तर, विदेशमै किन राखे ? खुल्दुली लाग्यो ।
- काजी राई
वियर पिउने युवतीको स्वभाव अचम्मको हुँदा रहेछ (वियर पिउने युवतीका स्वभाव) । सपिङभन्दा वियर मन पराउने युवतीहरू देखावटी नहुने रहेछन् ।
- अनिस भण्डारी
डेजर्टको मूल्य २५ हजार डलर ? (पत्याउनुहुन्छ ? महँगो परिकार बनाउने रेष्टुराँ) । अचम्म लाग्यो ।